Ethnic Nationalities Voice တိုင်းရင်းသားအသံ: December 2008
အမေရိကန်၏FTA ကြောင့် တောင်ကိုးရီးယာပါလီမာန်တွင်အဓိကရုန်းဖြစ်
S. Korean lawmakers brawl over US free trade pact
By JAE-SOON CHANG – 16 hours ago
SEOUL, South Korea (AP) — Brawling South Korean lawmakers tried to sledgehammer their way intoaparliamentary meeting room barricaded by the ruling party as the National Assembly descended into chaos Thursday overafree trade agreement with the United States.
South Korea and the United States signed the accord that calls for slashing tariffs and other barriers to trade in April last year after 10 months of tough negotiations, though neither side's legislature has yet ratified it — the key step needed for it to take effect.
ကုန်စည်ပြပွဲ၌ တရုပ် - ဗမာ အာဏာပိုင်များကိုကြိုဆိုရန် တိုင်းရင်းသားစာပေ/ယဉ်အဖွဲ့ဆင့်ခေါ်ခံရ
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ 17 ဒီဇင်ဘာလ 2008 သျှမ်းသံတော်ဆင့်
တရုပ် - မြန်မာ ကုန်စည်ပြပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မူဆယ်မြို့ ၁၀၅ မိုင်တွင် ကျင်းပရာ တက်ရောက် မည့် နှစ်နိုင်ငံလူကြီးများ ကြိုဆိုရန် ဒေသခံတိုင်းရင်းသားစာပေယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့များ ရိုးရာဝတ်စုံနှင့် မဖြစ်မနေတက်ရောက် ရမည် ဟု မူဆယ်မြို့အာဏာပိုင်များကဆင့်ခေါ်ကြောင်း တရုပ်နယ်စပ်သတင်းရပ်ကွက်ကဆိုသည်။
ဒီဇင်ဘာလ ၁၇ ရက် ၂၀၀၈ သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မူဆယ်မြို့၁၀၅ မိုင်တွင်ဖွင့်ပွဲ ကျင်းပသည့် တရုပ် - မြန်မာ ကုန်စည်ပြပွဲ တက်ရောက်ရန် မူဆယ်မြို့ပေါ်ရှိ ရပ်ကွက် ၆ ခု မှ တရပ်ကွက် လူအင်အားအယောက် ၁၀၀ အပြင် မူဆယ်ခရိုင်အတွင်းရှိ သျှမ်း၊ ကချင်၊ လီဆူး၊ ပလောင်၊ ကိုးကန့်တိုင်းရင်းသားစာပေယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့များ ရိုးရာဝတ်စုံအပြည့်နှင့် ယဉ်ကျေးမှုအက တခုခုဖြင့် နှစ်နိုင်ငံ အာဏာပိုင်များကို ကြိုဆို/ကပြဖျော်ဖြေရန် မပျက်မကွက်တက်ရောက်ရမည်ဟု နအဖအာဏာပိုင်များက ဆင့်ဆိုခဲ့ကြောင်း - အမည် မဖေါ်လိုသည့် တိုင်းရင်းသားစာပေယဉ်အဖွဲ့တခုမှ လူငယ်တဦးကဆိုပါသည်။“၁၆/၁၂/၂၀၀၈ က ကျမတို့ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ အစမ်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားသွားတက်ရတယ်။
အလုပ်မအားတော့ တကယ့်ဖွင့် ပွဲရက်မှသွားမယ်လို့ ကျမတို့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်က သွားတောင်းပန်လည်းမရဘူး။ ကနေ့ဆို မနက် ၄း၀၀ ကတည်းက ထ ပြီးပြင်ဆင်ရတယ်။ ယူနန်ပြည်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး နဲ့ ရမခ တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်အောင်သန်းထဋ် တက်မယ်လို့ပြောတာဘဲ။ ညကျ ရင်လည်း သွားကပြရဦးမယ်။”ဟု ဆိုပါသည်။မူဆယ်မြို့မြောက်ရပ်ကွက်က အသက် ၃၀ ကျော် အိမ်ရှင်မ အမျိုးသမီး တဦးကလည်း - “တရပ်ကွက်အယောက် ၁၀၀ မသွား မနေရလို့တော့ပြောတာဘဲ၊ အထက်တန်းစားစီးပွားရေးသမားတွေ အဲလိုပွဲဆို တခါမှမသွားဘူး၊ တခါလာရင်လည်း ကျမ တို့ဘဲ၊ ဘယ် တော့မှ အယောက် ၁၀၀ မပြည့်ပါဘူး။
တရပ်ကွက် အများဆုံး ၄၀ - ၅၀ လောက်ဘဲ။ တချို့တော့လည်းခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့ ရပ်ကွက် လူကြီးကို အားနာလို့သွားကြတာပေါ့” - ဟုသျှမ်းသံတော်ဆင့်ကိုပြောပြပါသည်။အဆိုပါကုန်စည်ပြပွဲကို နအဖ စစ်အစိုးရ နှင့် တရုပ်အစိုးရတို့က ပူးပေါင်းကာ တရုပ် - မြန်မာ နယ်စပ်တွင် မကြာခဏ ကျင်းပ လေ့ ရှိပါသည်။ တရုပ်ပြည်ထွက်လယ်ယာသုံးစက်အမျိုးမျိုး၊ ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးအပြင် ဗမာဘက်မှ လယ်ယာထွက်သီးနှံများ သစ်တော ထွက်ပစ္စည်များ နှင့် ဌာဆိုင်ရာထုတ်ကုန်များ ခင်းကျင်းပသကြောင်း သိရပါသည်။
တရုပ် - မြန်မာ ကုန်စည်ပြပွဲ အခါသမယကို အကြောင်းပြပြီး စစ်အစိုးရက တရုပ်ပြည်မှ စစ်လက်နက်တင်ယာဉ်ကြီးများ နယ် စပ် ဖြတ်ကျော်တင်ဆောင်သွားသည်ဟု - တရုပ်နယ်စပ် သျှမ်းပြည်အရေးလေ့လာသည့် ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကဆိုသည်။ အဆိုပါ ကြောင်းအရာ နှင့်ပတ်သက်၍ အသက် ၃၀ ကျော် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် အမျိုးသားတဦးက ကုန်စည်ပြပွဲအချိန်တင်မဟုတ်ဘဲ လက်နက်ကြီးတင် စစ်ယာဉ်ကြီးများ တနှစ်သုံးလေးကြိမ်မက ဗမာပြည်သို့တင်ဆောင်သွားကြောင်း၊ ယခုလဲ မူဆယ်လေယာဉ် ကွင်း၌ တရုပ်ထုတ် စစ်လက်နက်တင်ဆောင်ထားသောယာဉ်နှင့် စစ်သုံးယာဉ် အများအပြားရှိနေသေးကြောင်းဆိုပါသည်။
(အရပ်သားသတင်းထောက်(civilian journalist) မှပေးပိုသည်)
News - S.H.A.N.
Written by Hseng Khio Fah
The recent award given toadetained Shan leader indicates that ethnic leaders are not forgotten and their dedication and their work are not in vain, according to Harn Yawnghwe, Director of the Brussels-based Euro-Burma Office (EBO) and Advisor to the Ethnic Nationalities Council (ENC).
"This is how the world acknowledges our Shan leaders' efforts. They never give up their ideals even though they have been imprisoned," said Harn. "Our new generation must also be strong like them until democracy and genuine federalism are won whatever the dangers and difficulties are."
Khun Htun Oo is President of the Burma's second largest party Shan Nationalities League for Democracy (SNLD). He was arrested in 2005 together with Gen Hso Ten, leader of the ceasefire group Shan State Peace Council (SSPC), Sai Nood aka Sai Nyunt Lwin, SNLD General Secretary under several charges including defamation of the state, association with illegal parties and conspiracy against the state. All were separately imprisoned:
Maj-Gen Hso Ten 106 years Khamti prison
Khun Tun Oo (Hkun Htun Oo) 93 years Putao prison
Sai Nyunt Lwin, 85 years Kalay, Sagaing division.
U Myint Than 79 years Sandoway prison (died on2May 2006)
Khun Tun Oo's brother, Sao Oo Kya, was also sentenced to 13 years in prison. He is serving his time in Mandalay.
ကိုတိုင်းရင်း သားအသံဝိုင်တော်သူဝိုင်တော်သားအားလုံးအတွက်ဖြစ်ပါသည်၊
U.S. to provide $5 mln more for Myanmar relief aid
11 Dec 2008 01:32:31 GMT
(Corrects to Agency for International Development in paragraph 3) By Jeremy Pelofsky WASHINGTON, Dec 10 (Reuters) - Some U.S. aid is getting to the people of Myanmar and Washington plans to provide $5 million more in disaster relief in the aftermath of Cyclone Nargis that devastated the country in May, U.S. first lady Laura Bush said on Wednesday.
"This assistance will support the efforts of nongovernmental organizations like the World Food Program and Save the Children to ensure access to clean water, adequate shelter, basic health services, and other essential needs in the most affected areas," she said.
"We saw photographs of the shacks that the people who lived in the delta are building -- rebuilding to rebuild their homes, and they were built out of the rice sacks that were stacked with USAID and American flags," she said.
"So we do know that some of this relief we're sending into the cyclone area is getting to the people," Bush said.
"I'm going to pay, really,alot of attention to these two issues, the international issues that I've worked on the most, both Afghanistan and Burma," she said.
Myanmar's military junta has refused to accept losinga1990 election and has cracked down numerous times on pro-democracy demonstrators, killing thousands. (Reporting by Jeremy Pelofsky; Editing by Peter Cooney)
မြန်မာနိုင်ငံဟာဆင်ကုန်ကူးမှုအဓိကနိုင်ငံဖြစ်သည်Myanmar at centre of elephant smuggling trade: report
Myanmar at centre of elephant smuggling trade: report
BANGKOK (AFP) — Myanmar is at the centre of an illegal trade in elephants and ivory, with more than 250 live animals smuggled out of the country in the past decade,areport said Wednesday.
"Our research found evidence of corruption allowing the illicit smuggling of ivory and elephants to take place," Chris Shepherd, senior programme officer with TRAFFIC, was quoted as saying inastatement.
Smugglers took elephants over the frontier by bribing border officials, the report said, citing one guard as saying he had charged up to 200 dollars per animal because he was saving up to fly to Germany for the 2006 World Cup.
Yet no cross-border trade of live elephants had been reported to CITES by either Myanmar or Thailand, and some traders said elephants had disappeared from parts of Myanmar owing to numbers captured for the live trade, it said.
A survey by the group of 14 markets and three border markets in Thailand and China, which both adjoin Myanmar, also found 9,000 pieces of ivory and 16 whole tusks for sale, it said.
Reports of elephant disappearances and the amount of ivory on sale "suggests that trade posesasignificant threat to the survival of Asian elephants in Myanmar," said Vincent Nijman,aco-author of the report.
Myanmar has the largest elephant population in Southeast Asia, with an estimated 4,000 to 5,000 animals, the report said.
TRAFFIC and conservation group WWF called on authorities in Myanmar to work closely with enforcement officers in Thailand and China to address the illegal trade.
"Both Thailand and China must do much more to increase enforcement and crack down on this insidious trade," Susan Lieberman, director of the WWF international species programme, was quoted as saying in the TRAFFIC statement.
It called for greater monitoring of domestic elephant populations in Myanmar, including the use of microchip and tattoo-based identification systems to prevent illegal cross-border movement
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ 10 ဒီဇင်ဘာလ 2008 သျှမ်းသံတော်ဆင့်
ကချင်ပြည်နယ် ပူတာအိုအကျဉ်းထောင်၌ အကျဉ်းကျခံနေရသူ သျှမ်းခေါင်းဆောင် SNLD ဥက္ကဌ စ၀်ခွန်ထွန်းဦး ကို အီတလီနိုင်ငံ မွန်ဇာမြို့တော်ဝန်က ဂုဏ်ထူးဆောင်နိုင်ငံသားဆုချီးမြင့်ခဲ့ပါသည်။ ယခုလ ၉ ရက်နေ့က မွန်ဇာ မြို့တော်ခန်းမ၌ ကျင်းပ သောဆုပေးပွဲ အခမ်းအနားကို ဦးခွန်ထွန်းဦး ကိုယ်စား ဘရပ်ဆဲလ် အခြေစိုက် ဥရောပ မြန်မာရုံး လက်ထောက် ညွန်ကြားရေးမှူး ဦးဘိုဒီဇော်မင်းက တက်ရောက် လက်ခံခဲ့ပါသည်။
၄င်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဥရောပ-မြန်မာရုံး ညွန်ကြားရေးမှူး စ၀်ဟန်ယောင်ဟွေ့က “ ကျနော်တို့ သျှမ်းခေါင်းဆောင် တွေတကယ့်ကို ကိုယ်ကျိုးစွန့် အနစ်နာခံခဲ့တယ်ဆိုတာ ကမ္ဘာက အသိအမှတ်ပြုလိုက်တာပါဘဲ။ နှစ်ရှည်ထောင် ကျခံ နေရပေမဲ့ ကျန်းမာရေး ကောင်းဖို့အဓိက ဖြစ်နေတဲ့အတွက် စိတ်ဓါတ်မကျဖို့၊ ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ဖို့ ကျနော် က အားပေးစကားပြောချင်ပါတယ်။ ဆက်လုပ်စရာရှိတာကို ကျနော်တို့နောင်လာနောက်သားတွေ ဆက်လုပ်သွား မယ်လို့လဲ ပြောချင်ပါတယ်” လို့ပြောပါတယ်။
သျှမ်းခေါင်းဆောင်များ နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်ကျခံရမှုကြောင့် အမျိုးသားရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ သျှမ်းမျိုးဆက်သစ် လူငယ်များ အနည်းငယ်တုန့်နှေးသွားခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ စ၀်ဟန်ယောင်ဟွေ့က “ဖြစ်နိုင်တယ်။ အမျိုးသားရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတိုင်းကို စစ်အစိုးရက နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်တွေပေးပြီး မိသားစုထောင်ဝင်စာတွေ့ဖို့ခက်တဲ့ ဗမာ ပြည် နယ်စွန်နယ်ဖျားကို ပို့ပို့ပစ်တာဟာ မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေနိုင်ငံရေး၊ အမျိုးသားရေးမလှုပ်ရှားရဲအောင် လုပ်ပြတာဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့ ကြောက်သည်ဖြစ်စေ မကြောက်သည်ဖြစ်စေ မြန်မာပြည်ကြီးဒီမိုကရေစီ မရမချင်း၊ စစ်မှန်သော ပြည်ထောင်စုကြီးမဖြစ်မချင်း၊ စစ်အာဏာရှင်မကျဆုံးမချင်း ကျနော်တို့တိုင်းရင်းသား တွေဟာဖိနှိပ်မြဲဖိနှိပ်ခံနေရဦးမှာဘဲ။ ဒါကြောင့်ကြောက်ရွံ့လို့မနေနဲ့၊ တုန့်နှေးလို့မနေနဲ့၊ လုပ်စရာရှိတာလုပ်သွားပါ။ သူများကိုသွားအားကိုးနေလို့မဖြစ်ဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်အားကိုးရမယ်။ ကိုယ့်အချင်းချင်း စည်းလုံးရမယ်။ စည်း စည်းလုံးလုံးနဲ့ လုပ်စရာရှိတာလုပ်သွားရင် ကိုယ်မျှော်မှန်းတဲ့ပန်းတိုင် မလွဲမသွေရောက်မှာဘဲ။ ယခုနအဖရဲ့ လုပ် ရပ်ဟာ ခြိမ်းခြောက်တာသက်သက်ဘဲဖြစ်တယ်။ လုပ်စရာရှိတာဆက်လုပ်သွားရင် သူတို့လဲ ဘယ်လိုမှမတတ် နိုင်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ ခေါင်းဆောင်တွေလဲ အဖမ်းခံရသည့်တိုင်အောင် မကြောက်မရွံ့ စိတ်ဓါတ်ကြံ့ခိုင်နေသေး တာဘဲ။ သူတို့လမ်းပြတဲ့အတိုင်း ဆက်လုပ်သွားဖို့ ကျနော်တိုက်တွန်းအားပေးချင်တယ်” ဆက်ပြောပါတယ်။
ယခုလက်ရှိအခြေအနေသည် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွါးရေး အခက်အခဲကြုံနေရသည့်အခြေအနေဖြစ်သော်လည်း လွတ် မြောက်သည့်နေ့ တစ်နေ့ရှိမည်မလွဲဟုယုံကြည်ကြောင်း၊ မတရားအကျဉ်းချခံရသည့် မြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်း ဆောင်များအကြောင်းကိုလည်း ယခုကဲ့ သို့ ကမ္ဘာကသိအောင် မိမိတို့အနေဖြင့် ဆက်လက် ကြိုးပမ်းသွားမည်ဖြစ် ကြောင်း ဦးဟန်ယောင်ဟွေ့ကပြောပြသည်။
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုကိုကြီး ၊ ၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး ဦးဆောင်ဆရာတော် အရှင်ဂမ္ဘီရနှင့်လူ့အခွင့် အရေး လှုပ်ရှားသူ မစုစုနွေးတို့လည်း ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆု ချီးမြင့်ခြင်းခံခဲ့ရဖူးသည်။ အီတလီနိုင်ငံ ပြည်သူလူထုနှင့် အစိုးရတို့သည် အဖိနှိပ်ခံ မြန်မာပြည်သူများနှင့် တသားတည်းရှိနေကြောင်း ပြသသည့်အနေဖြင့် ကျောင်းသား ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူအား စစ် အစိုးရဖမ်းဆီးကာ နှစ်ရှည်ထောင်ချနေသည်ကို အီတလီနိုင်ငံအနေနှင့် ကန့်ကွက်ကြောင်း အကြောင်းကြားစာပေးပို့ဦးမည်ဟု လည်းသိရပါသည်။
သျှမ်းပြည်မျိုးဆက်သစ်ခေါင်းဆောင်များ ဦးဆောင်ကျင်းပသည့် ၂၀၀၅ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၇ ရက် သျှမ်းပြည် နယ် နေ့ ညစာစားပွဲ ကို အကြောင်းပြု၍ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၈ ရက်နှင့် ၉ ရက်နေ့များ၌ SNLD ဥက္ကဌ စ၀်ခွန်ထွန်းဦးနှင့် အတွင်းရေးမှူး ဦးစိုင်းညွန့်လွင်တို့ကို ရန်ကုန်မြို့နေအိမ်၌၀င်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ သျှမ်းပြည်အတိုင်ပင်ခံ ကောင် စီဖွဲ့စည်းမှု စွပ်စွဲချက်အပြင်အခြားသော အမှုပေါင်းများ စွာဖြင့်ထောင် ဒဏ် ၉၃ နှစ် စီရင်၍ ဥက္ကဌကြီးအား ရာသီဥတု ဆိုးဝါးလှသော ကချင်ပြည်နယ်ပူတာအိုထောင်သို့ပို့လိုက်သည်။ ထို့အပြင်စစ်အစိုး ရတို့ ဆက်တိုက် ဖမ်းဆီးခဲ့သော SSA အပစ်ရပ် ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်ဆေထဲန့်၊ စိုင်းညွန့်လွင် အပါအ၀င် ၂၀၀၆ မေလ က သံတွဲထောင်၌ ကွယ်လွန်သွားသော သျှမ်းပြည်မျိုးဆက်သစ် ခေါင်းဆောင် ဆရာဦးမြင့်သန်းနှင့် အဖွဲ့ဝင်များကို ထောင် ဒဏ် ၇၅ မှ ၁၀၆ နှစ်အထိ နှစ်ရှည်ချမှတ်၍ ရာသီဥတုဆိုးဝါးလှသော မြန်မာပြည်နယ်စွန် နယ်ဖျား အသီးသီးသို့ ပို့ဆောင်ခဲ့သည်။
“ထေရ၀ါဒရဟန်းတော်တပါးအနေနှင့် ၀င်ရောက်အရွေးခံတာက ထေရ၀ါဒအနေနှင့် မသင့် တော်လို့ ဦးဇင်းမြင်တယ်။ ဒီလိုအရွေးခံတာဟာ ရာထူးဌာနန္တရနဲ့ တိုက်ရိုက်ပတ်သတ်နေ တဲ့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မသင့်တော်လို့ပြောရတာပါ။ ဒါပေမယ့် ဘင်္ဂလာဒေ့ခ်ျနိုင်ငံဟာ ဗုဒ္ဓ ဘာသာနိုင်ငံမဟုတ် တဲ့အတွက် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံမှာ ဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာ ဦးဇင်း တိတိကျကျ မသိပါတဲ့အတွက် ဒီထက် ဘာမှ ပိုပြောနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။”
ချက်ကမာခေါ် သက်အမျိုးသားအများစုမှာ ဘင်္ဂလာဒေ့ခ်ျနိုင်ငံ စစ်တကောင်းတောင်တန်းနယ် ခခါဆိုးရီနှင့် ရင်ဂါမတီခရိုင်တွင် နေထိုင်ကြပြီး ဘင်္ဂလာဒေ့ခ်ျနိုင်ငံရှိ တိုင်းရင်းသားများ ထဲတွင်နိုင် ငံရေးအတက်ကြွသည့် လူမျိုးတမျိုးဖြစ်သည်။
(ဓါတ်ပုံများသည် Civilian Journalist အရပ်သားသတင်းထောက်တစ်ယောက်မှပေးပို.သည်)
People Power, Chart Thai and Matchima Thipataya parties disbanded
The Constitution Court on Tuesday ruled to disband three coalition parties, People Power, Chart Thai and Matchima Thipataya, and banned the three's party executives from electoral process for five years.
The high court held the three parties for accountability on electoral fraud involving party executives, Yongyuth Tiyapairat of People Power, Monthien Songpracha of Chart Thai and Sunthorn Wilawan of Matchima Thipataya.